Sandals Resorts zvinoita kuti zvive nyore kumutsidzira kudanana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Jamaica Nhau » Sandals Resorts zvinoita kuti zvive nyore kumutsidzira kudanana
Kuputsa Jamaica Nhau • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kungoti Zuva raValentine rapfuura, hazvireve kuti vakaroorana havagone kupemberera rudo mazuva makumi matatu nemazana matatu pagore! Sandals Resorts iri kukurudzira vakaroorana kuti vatore mutambo uye kushuvira zuva rega rega nekuunza nyowani Rekindle Romance yekuwedzera-pasuru, yave kuwanikwa kubhuka kwekugara kwehusiku hutatu kana kupfuura. Kana iwe wakagadzirira kudanana kutiza, pasuru iyi inosanganisa zvakanakisa mune zvinowanikwapo, hwomutambarakede uye nhanho mune imwe yekupedzisira rudo rudo zororo.
Iyo Rekindle Romance package inowanikwa kuwedzera-on uye inowanikwa kusvika pakupera kwegore - nekuti kudanana kunoitirwa kupembererwa mazuva ese, kwete muna Kukadzi chete! Iyi yerudo yekuwedzera-pasuru inosanganisira:
• Bhodhoro reMoet & Chandon Champagne + Chokoreti
• Maawa maviri Emahombekombe egungwa - Tora maonero eakadzikama mahombekombe kubva pachigaro chakanakisa mumba chakazara nesarudzo yeinopenya kana imba yewaini.
• Yakavanzika Kenduru Kudya Kwemanheru - Gadza mamiriro ezviyeuchidzo, mazuva ekuzvarwa kana kunyangwe mazano nekenduru yemwenje kwemaviri. Iyi yega yega-kosi yekudya kwemanheru izere neyakagadzirirwa sevhisi nemamenyu, ayo anosanganisira bhodhoro reRuffino Prosecco uye zvisingagumi kudururwa kweRobert Mondavi Twin Oaks® waini.
• Spa Refresher - Rakafuridzirwa neakanaka uye ane mbiri kumashure ezvitsuwa zveCaribbean, ino yekumutsidzira Spa inotora kumeso kune imwe nhanho. Masevhisi maviri anosanganisira 30 Minute Lavender Scalp Massage kana tsoka Massage yeiyo yekupedzisira fomu yekuzorora uye kudzoreredza.
• Romance Zororo Photobook - Pedzisa nemifananidzo yako yakanaka yekuchengeta yako zororo kana yehoneymoon ndangariro zvachose.
Sandals Resorts yakagara ichifananidzwa nerudo, pasina chikamu chidiki nekuda kwekupedzisira Muvambi uye Sachigaro, Gordon "Butch" Stewart. Inozivikanwa se "Iyo Cupid yeCaribbean," Stewart akatanga Sandals Resorts aine chinhu chimwe mupfungwa - vanhu vaviri vari murudo. Rudo rwuri mumhepo mazuva makumi matatu nemazana matatu nemashanu pagore chero eimwe gumi nemashanu Luxury Inosanganisirwa® Sandals Resorts.
Kune vakaroorana vanonzwa rombo murudo, ivo vachiri nenguva yekupinda iyo "Rudo Ndiro Zvese Zvaunoda uye Sandals Sweepstakes" irikuitika izvozvi kusvika munaFebruary 28, 2021, yemukana wavo wekuhwina mazuva manomwe, matanhatu-husiku husiku rudo Mahotera akaitirwa maviri.